Nzira dzekuwedzera Instagram Views - RayHaber | raillynews
mushaGENERALNzira dzekuwedzera Instagram Views
14 / 01 / 2020 GENERAL, Tsamba yekutanga, TURKEY
nzira dzekuwedzera instagram maonero
Instagram, imwe yemapulatifomu akakurisa epasi rose, inongova chikamu chekugovera mapikicha, asi zvakare inobvumidza kugovana vhidhiyo nekuwedzera akasiyana-siyana nguva nenguva. Nezvazvino zvichagadziriswa zve Instagram zvaita kuti application iwedzere kushanda.
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha pane izvi kugadziriswa kuunza vhidhiyo yekutarisa sarudzo kune Instagram application, zvese zvinoenderana nemashandisi e Instagram evashandisi uye ikozvino paine zvimwe zvinowedzerwa zvekushandisa iyi. Kuona kwevhidhiyo pa Instagram kwauya kumberi mushure mekugadzirisa izvo zvakaziviswa nekukurumidza mushure mekuwedzera kwekukosha kwakapihwa kugovera vhidhiyo ne Facebook application.
Ichi chaive chimwe chezvitsva zvakapihwa ne Instagram. Zvino, neruzivo urwu, tinofanirwa kuudza vashandisi veAlion kuti vangani mavhidhiyo avo akaonekwa uye yakawanda sei yavanofarira, uye kuti Instagram mumakwikwi ekuona vhidhiyo maficha ane nhamba uye makomendi. Asi ikozvino kunyange vashandisi vanoshanda kuti vawedzere huwandu hwevhidhiyo maonero anosangana.
Avo vasingadzoreki pachinhu ichi vanogona kunge vachiri kusaziva. Kutanga Instagram vhidhiyo nguva yakawedzera kubva pamasekondi gumi nemashanu kusvika pamakumi matanhatu. Kuwedzeredza vhidhiyo yekugovana akagadziridzwa kusvika pamasekonzi makumi matanhatu makumi matanhatu kwatanga kubvumira vashandisi veA Instagram kuita mukutorwa kwevhidhiyo. Instagram inoziva mamiriro aya uye iri kugara ichipa humbowo hutsva hwekutorwa kwevhidhiyo.
Kuwedzera Kwaungaita Vhidhiyo Views
Ngatikubatsirei neizvi nekuti huwandu hwemaonero evhidhiyo mu Instagram hwave hwakakosha. Sei kuwedzera vhidhiyo kuona? Kutanga, iwe unofanirwa kuvandudza kunaka uye kusiana kwemavhidhiyo ako. Mazuva ano kamera nemakamera anogadzirwa kunyanya enhau. Kuishandisa ivo kuchakubatsira iwe kuvandudza kunaka kwevhidhiyo. Panzvimbo yakakosha, zvakakosha kwazvo kuisa nguva dzevhidhiyo zvakanaka. Kunyangwe kana mavhidhiyo akabvumidzwa kwenguva makumi matanhatu, iwe unogona zvakare kugovana mavhidhiyo mashoma pane ino nguva.
Kumisikidza nguva yacho zvakanaka kuchaita kuti vanhu vatarire kwauri uye kwakanyanya kukosha maererano nekufarira. Kunze kweizvi, zvakakosha zvikuru kugadzirisa nekugadzirisa mavhidhiyo mune chimiro chehunyanzvi kuitira kuti unatsirise mhando yevhidhiyo. Vanoshandisa Instagram vanogovana mavideo avanofarira uye vane chekuita zvakananga nekuwedzera kwehuwandu hwemaonero. Vamwe vashandisi vanoshandisa zvakare kushoma kushanda uye kutenga vanyengeri ekuona kuti vawedzere kuwanda kwemavhidhiyo munzira ipfupi. Izvi zvinobvumira nhamba yepamusoro yemavhidhiyo kutariswa nekushoma kuedza. Kutenga vateereri pa Instagram kwave kuzivikanwa zvikuru munguva pfupi yapfuura.
Kuti uve nevateereri vakakura, iwe unofanirwa kuwedzera kubatirana. Zvinhu zvekuitira izvi;
Mifananidzo ine iyo kumeso inounza 38% mamwe kufarira uye 32% mamwe maonere.
Mifananidzo ine vanhu chaivo vanoshandisa chero chigadzirwa inopa makumi matatu muzana mukana wekudyidzana (yebrand).
Mwenje-huremu mapikicha ari 24% kutapurirana pane rima-kara mavara.
Mifananidzo ine rakawanda nzvimbo yekumashure inopa 29% zvakanyanya kubatika kupfuura zvidiki.
Ichi chishandiso chinopawo kudyidzana kwakanyanya paSvondo uye zvinokwana Chitatu.
5 uye mashoma ma hashtag anopa zvakawanda kuwirirana ne2% yemifananidzo inoshandiswa. (6 hashtag uye zvimwe kuderedza kudyidzana).
Mifananidzo inopa 26% zvakanyanya kuwirirana kupfuura mavhidhiyo.
Mukushandisa uku, iyo inoshandiswa zvakanyanya Mayfair athari inopa 2% kutarisana kupfuura mashoma anoshandiswa Toaster athari.
Mapikicha anebhuruu anotungamirwa anopa 24% kuwirirana pane tsvuku-dzakadzoreredzwa mafoto.
Chinhu chakanyanya kukosha "Kudyidzana" (beğeni, yorum, paylaşım vs.) bu uygulama da en önemli durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Instagram etkileşiminizi arttırmanın yolları sezvataurwa pamusoro.
Iyo inokurumidza kukurumidza kugara munhau media
Maererano nekuongorora kwakaitwa pakati pezvemagariro enhau epasi rose, Instagram yakasarudzwa sedanho rinoshandiswa zvakanyanya munhau. Iyo inokurumidza kukurumidza kugara munhau media Kune vanopfuura mamirioni mazana maviri vashandisi. Iyo inokwana kagumi nemashanu kupfuura yekushandisa Facebook uye makumi mana kakapetwa pane Twitter application.
Instagram yekubatanidza nemamwe masocial network
Zvinoenderana nekugoverana nemifananidzo yemifananidzo uye kungogovana nezvinyorwa zvemukati; muna LinkedIn98% ine zvakawanda zvekudyidzana paGoogle 94% kubatirana kwakawanda, uchiri pa Facebook 73% ine zvakawanda zvekudyidzana, uye Twitter 35% inogamuchira zvimwe zvidzokororo. Iyo ipikicha yemagariro enhau ine chikuva Instagram yekubatanidza nemamwe masocial network inoratidzawo chimiro chinogona kupa budiriro.
Kune vanhu vashoma kwazvo vasingashandise iyi social media platform, iyo inonyanya kushanda munyika. Kana tikashandisa Instagram nemazvo, tichakwevera tarisiro.
Heano mashoma matipi;
Kushandiswa KweHashtag:Iwe haufanirwe kukanganwa kuti hashtags zvakare ane mwero (iwe unofanirwa kuve nehurefu hwemashanu hashtag), asi yeuka kuti hashtag inoshanda mukutsvaga.
Kugara kugovera zvemukati: Iwe unofanirwa kupa anoteedzera ekutevera kune vateveri vako panguva yakatarwa nguva. (100) ezvigadzirwa zana anozivikanwa kwazvo anogovana chinenge chikamu chimwe chete muvhiki, apo makumi maviri nemasere vanogoverana migove shanu muvhiki.)
Nguva chaiyo: Iwe unofanirwa kuratidza vateveri vako nguva yakakodzera uye migove yakakodzera. Muenzaniso: iwe unofanirwa kugovera nguva yako, mwaka, zororo, chiitiko uye zvichingodaro.
kwikwidza: Instagram üzerinden düzenlenen yarışmalar, Instagram’ da kitlenizi genişletmeniz ve de gönderinizin etkileşimini arttırmanız için bu konuda oldukça etkili bir yöntem yarışmadır.
motokari: Goverana kero yeakaundi yako yeA Instagram account pane mamwe mapuratifomu enhau (kana sanganisira munzvimbo dzakavanzika), kuti iwe ugone kuwedzera traffic yako.
Zvinoenderana neruzivo rwakapihwa pamusoro, hazvisi zvakaoma kuve nemasaisa akakura. ichi Instagram zano Ndinovimba mave muchibatsira nazvo.
Inotungamira kambani Crover pamusoro iri kukubatsira iwe, vashandisi vedu vanokosha, nekupa yakavimbika sevhisi munzvimbo dzakawanda mapuratifomu, iwe unogona kuwana hwakanakisa hwemhando yepamusoro basa mune izvi.
Vachida Kukwidza Vanosangana muUludağ
Bursalı climbers vari kugadzirira kukwira maFrench Alps muUludağ
Ilgaz Mountain Winter Kupenya
Tsvina iri kukwira!
Yaşar Rota akanyora New Terminology yeTare uye Kutakura
Nzvimbo huru yekutsvaga kwekutsvaga mu 2015
Nzvimbo yepamusoro mu 2015
Nhamba yekufambisa kwezvitima kuU.S. inowedzera munaMugabe pasinei nekuwa kwekutengeswa kwesimbi
Kuwedzera kwenhamba dzezvikwata kuAnkara-Konya YHT mutsara
Nhamba yepasipoti zvinyorwa zvekutakura mumugwagwa wenyika dzakawanda
Ordu Boztepe cable motokari yakawedzera nhamba yevashanyi
Ankara-Konya YHT kufamba kwakawedzera
Nzira dzekuwedzera yako Instagram kuwirirana
Sei Kuwedzera Instagram Video Views
Maitiro Ekuwedzera Kwayo Vhidhiyo